नायिकाको शव दुई टुक्रा पारी बोरामा, पतिले नै किन गरे त्यस्तो अपराध ? - Everest Dainik - News from Nepal
नायिकाको शव दुई टुक्रा पारी बोरामा, पतिले नै किन गरे त्यस्तो अपराध ?
चलचित्र क्षेत्रमा राम्रो नाम कमाएकी नायिका समेत आफ्नै श्रीमान्द्वारा विभत्स हत्याको शिकार भएको खबरले विश्व समुदायलाई नै एकपटक फेरि स्तब्ध बनाइदिएको छ। घटना बंगलादेशको हो।
गत आइतबारदेखि हराइरहेकी बंगलादेशी अभिनेत्री राइमा इस्लाम शिमुको शव टुक्रा पारेर बोरामा पोको पारेको अवस्थामा फेला परेको छ। शरीरलाई दुई टुक्रा पारेर बोरामा बन्द गरेर फ्याँकिएको अवस्थामा ढाकाको केरानीगञ्जको आलियापुर क्षेत्रमा शव फेला परेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीका अनुसार ३५ वर्षीया अभिनेत्री शिमुको गर्धनमा चोट लागेको देखिएको छ। घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले उनका पतिसहित ६ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। मंगलबार ढाकामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रहरीले शिमुका पति सखावत, उसका साथी, ड्राइभर सहिति ६ जनालाई पक्राउ गरी तीन दिनको म्याद थपेर हिरासतमा राखेको जानकारी दिएको छ।
उनका पतिले घरायसी विवादका कारण पत्नीको हत्या गरेर फ्याँकेको प्रहरीसँगको बयानमा स्वीकार गरेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।
शिमु ढाकाको ग्रीन रोड क्षेत्रमा आफ्ना पति र दुई सन्तानका साथ बस्दै आएकी थिइन्। आइतबार बिहान सुटिङका लागि घरबाट निस्किएकी उनी त्यसपछि बेपत्ता भएकी थिइन्। राति अबेरसम्म पनि नफर्किएपछि उनको खोजी तीव्र पारिएको थियो।
सोमबार बिहान उनको शव दुई टुक्रा बनाएर बोरामा पोको पारेर फ्याँकिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। शव फेला परेसँगै शिमुका भाइले उनका पतिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएका थिए। घटनाका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान अगाडि बढाइएको ढाका प्रहरीले बताएको छ।